Zucchini nofonoina ronono miaraka amin'ny fromazy. Recipe ao an-dakozia
Maria vazquez | 30/05/2021 10:00 | Resipeo tsotra
Androany aho dia mamporisika anao hanomana fomba fahandro izay matetika ampiasaintsika any an-trano hamitanana ny sakafonay: zucchini feno voaroy miaraka amin'ny fromazy. Zucchini voarohirohy dia loharano lehibe, tsotra sy haingana. Ary ny fahandroana ny henan'ireto ao anaty microwave dia tsy mihoatra ny 4 minitra.
Ao amin'ny microwave? Talohan'ny nanaovantsika azy tao anaty lafaoro, fa satria nahazo ny fihantonan'ilay microwave isika, isaky ny ampirisihina isika handrahoana bebe kokoa amin'ity fitaovana ity. Izy io koa dia fomba haingana hanatanterahana azy. Na dia tsy tokony hirotorotoana aza ianao; Mivoaka amin'ny hafanana avo lenta izy ireo ka mila miandry minitra roa handoavana ny hena ianao nefa tsy handoro tena.
Rehefa rava ny zucchini dia azonao atao ny mameno azy ireo amin'ny maro fitambaran-tsakafo mafana sy mangatsiaka. Amin'ity indray mitoraka ity dia miloka amin'ny fampifangaroana ny zucchini amin'ny tongolo, tuna, voatabia ary fromazy isika. Mihevitra ve ianao fa fitambarana folo? Gratin farany ary ho vonona hanompo izy ireo.
Ireto Cheuces Tuna Stuffed Zucchini ireto dia safidy tsara amin'ny sakafo hariva. Tsotra sy haingana ny fanomanana, azoko antoka fa hamerina azy ireo ianao.
Voahangy 2 an'ny tuna voajanahary
Manasa tsara ny zucchini isika, manapaka azy amin'ny antsasaky ny halavany ary mitondra azy mikraoba amin'ny herinao lehibe indrindra mandra-pahalemy; 4 minitra eo ho eo. Aorian'izay dia esorinay amin'ny lafaoro ary avelao izy hipetraka mandritra ny minitra roa alohan'ny hanesorana ny hena amin'ny sotro.
Raha mahandro ny zucchini, tetehina tsara ny tongolo ary endaso amin'ny lapoaly miaraka amin'ny menaka afrikanina.
Rehefa malemy ny tongolo, ampio ny hena zucchini, voatabia sy tanety, manaova fotoana ary andraho mandritra ny roa minitra ny iray.
Farany, izahay mameno ny zucchini amin'ny mifangaro, ampiana fromazy eo amboniny sy gratin izahay mandra-piempo ny fromazy.
Manolotra ny zucchini feno tuna misy fromazy izahay, mafana
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: firosoana » Recipe manokana » Resipeo tsotra » Zucchini feno voaroy miaraka amin'ny fromazy